Si aad u yeesho degel, waxaad u baahan tahay saddex shay: domain magac, martigalin web, iyo degel horumaray. Laakiin waa maxay magac domain? Waa maxay martigelinta shabakadda? Miyaanay isku pertengahan ahayn? Waa muhiim inaad si cad ugu kala aragti duwanaato wixii ka soo kordha ka hor intaadan u dhaqaaqin abuuro iyo martigeli boggaaga koowaad.
0.1 Tuan rumah Web Noocyada kala duwan ee
0.1.2 Pelayan Hosting heegan ah
1.1 Waa maxay Domain Magaca?
1.3 Shabakada Marti-gelinta iyo Magaca Magaca Soalan Lazim
1.3.1 Membaca dheeraad ah
Inta badan ma aha, ereyga "hosting laman web" waxa loola jeedaa shirkadda kireeya kombiyuutarkooda / pelayan-keeda si ay u kaydiso website-kaaga oo ay bixiso internetka si ay dadka kale isticmaali karaan faylasha ku yaal boggaaga.
Laman web-dhejiye – laman web Qalabka qaab-sameynta bogga-iyo-dhicidda si loo abuuro
E-mel martigelinta – Inaad dirto oo aad hesho emayl [E-mel ilaaliyo]
Qalabka aasa Latihan ah (pelayan kumbuyuutar) iyo softiweer (CMS, OS OS, iwm) taageero
Ereyga "hosting laman web" badanaa wuxuu loola jeedaa pelayan-yada martigelisa boggaaga ama shirkada martigelisa ee kireeya goobtan.
Pelayan Tani waa. Magaca Tanyakan: Pelayan DELL 463-6080. Waxay u muuqataa oo waxay u shaqeysaa sidii desktop-kaaga gurigaaga – wax yar ka weyn oo ka xoog badan.
Tuan rumah Web Noocyada kala duwan ee
Waxaa jira jauh nooc oo kala duwan oo marti-geliyaasha ah: Wadaag, Wareegga Gaarka ah ee Gaarka ah (VPS), Dedicated, iyo Cloud Hosting.
Dalam kasta oo noocyada kala duwan ee server-yada ay u adeegsanayaan xarun lagu keydiyo website-kaaga, waxay ku kala duwan yihiin qadarka kaydinta, xakamaynta, shuruudaha aqoonta farsamada, pelayan xawaaraha, iyo kalsoonida. Waxaan ku tusi doonaa khilaafaadka udhaxeeya VPS, wadaag, iyo dariiqa martigelinaya qaybta soo socota.
Pelayan Hosting heegan ah
Dhibaatooyinka – Iyadoo terjaga weyn ay timaado … si fiican, kharash badan. Qodobbada loo yaqaan ‘Pelanggan’ waa kuwo aad u qaali ah oo waxaa kaliya lagula talinayaa kuwa u baahan kantaroolka ugu sareeya iyo waxqabadka serverka.
Waa maxay Domain Magaca?
Domain waa cinwaanka laman web-kaaga. Ka hor inta aanad samayn karin bog internet, waxaad u baahan doontaa domain.
Magaca Domain ma aha wax jir ahaaneed oo aad taaban karto ama arki karto. Waa xaraf jilayaal ah oo ku siiya boggaaga aqoonsi (haa, magac, sida aadanaha iyo ganacsiyada). Domain Tusaale ahaan magac: Google.com, Alexa.com, Linux.org, eLearningEuropa.info, iyo sidoo kale Yahoo.co.uk.
Dhamaan magacyada domain waa mid gaar ah. Tani waxay ka dhigan tahay di ay jiri karto oo keliya halbeegyada shabakadaha caalamka. Ma diiwaangelin kartid magac marka ay diiwaangashadaan kuwa kale (ay maamusho ICANN).
Shakhsi ahaan, sida caadiga ah waxaan iska diiwaan galiyaa magacyadayda Magaca Kharashka oo ay marti galiyaan iyagoo bixiya adeeg bixiye kale oo kala duwan. Boggan waxaad akhrineysaa, khasale ahaan, waxaa lagu martiqaaday InMotion Hosting.
Cara sahlan tahay inaad u guurto shirkad cusub oo marti gal ah markaad diiwaangeliso domainkaaga dhinac saddexaad. Haddii kale, waxaad ku dabooshaa inaad sugto shirkaddaada martigalinta si aad u sii dayso domainkaaga. Tani waxay heli kartaa xeelad ah tan iyo markii ay sidoo kale ka luntay ganacsiga martigelinta.
@WebHostingJerry arkeen boostadaagii ugu dambaysay ee aad martigelisay. mahadsanid. qoraallo yar: namecheap dhab ahaantii waxay ku hayaan haya’daha martigalinta / magac domain ah, sidaa darteed waxba ma dhicin inay saameyn ku yeelato martigelinta ama domainka ama kan kale. dalam dhab ahaantii ahaa maskax run ah (isku xiri)
@WebHostingJerry maalinta dib ugu noqo, laakiin taasi waa tan ilaa markaa isbeddelay. anaga oo ah magacyada loo yaqaan’checheap ‘ayaan si qoto dheer ugu qorney markii aan abuurnay shirkad marti-galin gooni ah, ku dhawaad, magacyadeena hoosta. cara kala duwan yihiin. ayah kala duwan. arag https://t.co/vNM0toRuIg
Wixii # 2 – halkan waa tilmaamaha tafaasiisha ah ee ku saabsan sida ku wareeji magacaaga nama domain Nama Murah. Oo halkan sida aad u sameyn karto GoDaddy. Asal ahaan waxaad u baahan tahay inaad sameyso
Ogsoonow, sida kudhaca Beddelka Nidaamka Diiwaangelinta ICANN, domain kayar maalmihii 60 maalmood ama la wareejiyay maalmihii ugu dambeeyay ee 60 lama wareejin karo. Waa inaad sugtaa ugu yaraan 60 maalmood kahor wareejinta.
Shabakada Marti-gelinta iyo Magaca Magaca Soalan Lazim
Wakhtiga serverka, ikhtiyaarrada martigalinta martigelinta, qiimeynta, astaamaha gurmadka, guddiyada xakameynta, iyo saaxiibtinimada bey’ada ayaa ah astaamo muhiim ah oo tixgelin leh markaad dooraneyso martigeliyaha shabakad Kahor intaadan dooran, waxaad marka hore fahmi doontaa baahiyaha boggaaga – waa kuwan su’aalaha aad isweydiinaysid hadaadan aqoon meesha aad ka bilaabi lahayd.
Websaydh kastaa wuxuu caadiyan lahaan doonaa faa iidooyinkiisa iyo qasaarooyinka u gaarka ah marka la eego astaamaha, markaa waxaad u baahan tahay inaad doorato waxa ku habboon baahidaada. Si kastaba ha noqotee, qaar baa inta badan sameeya wax ka fiican kuwa kale. Waxaan dhisnay nidaam kormeer oo loogu magac daray “HostScore” – waxay kuu oggolaaneysaa inaad eegto xawaaraha martigelinta websaydhka iyo isku halaynta, sidaa darteed hubi inaad tixraacdo goobtaas ka hor intaadan bixin martigalinta.
Webka WordPress-ka ma marti baahay?
Marka la soo gaabiyo – haa, waa suurtagal. Si kastaba ha noqotee, martigelinta websaydhkaaga si kalsooni leh waxay u baahan tahay maalgashi weyn oo xagga qalabka iyo kaabayaasha ah. Sida ugufiican uguna kalsoonida badan ee aad rabto di martigelintaada u noqoto, kharashka sare.
Immisa ayay ku kacaysaa dalam lagu marti galiyo degel?
Kharashaadka ku baxa martigalinta websaydhada waxaa ka mid ah websaydhka laftiisa, domain magaca, abuurista tusmada, naqshada garaafka, horumarinta shabakada, iyo suuq geynta. Si kastaba ha noqotee, martigelinta websaydhka lafteeda ayaa filaya inay bixiso inta u dhaxaysa $ 3 illaa $ 10 bishii bishii oo ah marti-gelinta caadiga ah ee la wadaago. Marti gelinta VPS ayaa si aad ah qaali uga kici doonta.
Membaca dheeraad ah
Laman web Markaad abuurayso
Intee ayey ku kacaysaa di laman web la dhiso-ka
Laman web markaad maareysid-kaaga
Laman web Sida loo guuri karo-kaaga martigeliye kale
Bixiyeyaasha martigelinta ugu fiican dan isticmaalayaasha WordPress